मनोरञ्जन क्षेत्रः महिलाको शरीरमा पुरुषको मस्ती |
मनोरञ्जन क्षेत्रः महिलाको शरीरमा पुरुषको मस्ती
प्रकाशित मिति :2018-08-07 12:22:30
एक दिन मात्रै ती ठाउँका होटलमा अलि मिहिन ढंगले अनुगमन गर्ने हो भने सहजै पत्ता लाग्छ, १०÷११ वर्षदेखिका बालिकाहरूलाई वयस्क पुरुषहरूले छानीछानी मनोरञ्जनको साधनको रुपमा प्रयोग गरिरहेका छन् ।
व्यवसायीहरूको लागि यौन व्यवसाय अर्थात् कमाउने धन्दा । बालिका र किशोरी प्रलोभनमा वा कमाउने आशामा यौन शोषणमा छन् । यही विषयबारे रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा प्रत्यक्ष देखिएको छ, –ठमेलका केही मसाज पार्लरमा पनि मसाज गर्ने नाम मै यो काम भइरहेको छ । किशोरीहरूलाई कामदारका रुपमा राखेर मसाज पार्लरका संचालकहरूले ग्राहकलाई ‘सन्तुष्टि’ दिइरहेका छन् ।
रिपोर्टिङकै क्रममा एक किशोरीले अनुभव सुनाईन्, ‘झण्डै एक वर्ष बन्धक जस्तै बनाइएर काममा लगाए । घर जान पनि दिइँदैनथ्यो । काठमाडौंमा केही गर्ने भन्दै घरबाट अलि टाढाका आफन्त पर्नेसँग भागेर आएँ । पछि मसाज सेन्टरमा पुगें । दिनमा ५/७ जना ग्राहक पनि हुन्छन् । सबै ग्राहक पुरुष हुन्छन् । मसाजका लागि भनेर आउने पुरुष ग्राहकसँग एक्लै कोठामा घण्टौं बिताउनु पथ्र्यो । मसाज त नाम मात्र हो । त्यो भन्दा बढी आफ्नो शरीर सुम्पिनुपथ्र्यो । त्यो पनि ग्राहकले भनेअनुसार ।’
काठमाडौंको गौशाला, चाबहिल क्षेत्रका गेष्ट हाउस (विदेश जाने र आउनेहरूको बास बस्ने ठाउँ हो । जाने अघिल्लो रात रमाइलो गरेर जाने भनेर आएका भन्नेहरू धेरैसँग रात बिताएको अर्की एक किशोरीले बताइन् ।
कोही पुरुष आयो कि उसले कसलाई हेर्छ भनेर सबै बालिकाका नजर तिनैतिर । सामान्य व्यक्तिलाई असहज लाग्ने हाउभाउ । त्यति मात्र कहाँ ! उनीहरूको लत यसरी बिग्रिइसकेको हुने रहेछ कि, चुरोट उडाउने बानी सामान्य झैं लाग्ने ।
बाहिरबाट यस्तो दृष्य देख्दा हामीलाई लाग्छ यी किशोरीहरू खुसीले शरीर बेचिरहेका छन् । हामी ठान्छौं पनि पैसाको मोलमोलाईमा यौवन सुम्पिएका छन् । तर उनीहरू आफूलाई बेच्ने तहमा कसरी आइपुगे ? कसैले सोचेको होला त ?
पर्यटकीय क्षेत्र ठमेलको अवस्था अझ फरक छ । मसाज सेन्टर र मसाज पार्लरका नाममा चलेको व्यवसाय पनि त्यस्तै छ । सेवा दिने किशोरी\_महिला छन् । सेवा लिने ग्राहक जति सबै पुरुष । किशोरीहरूका कलिला हातले पुरुषको शरीर मसाज भइरहेको छ । त्यही मौकामा किशोरीले शरीर नै सुम्पिनु परेको छ । अझ भनौं मसाज गर्न आउने नाममा पुरुषहरूले किशोरीहरूका शरीरमा ‘मस्ती’ गरिरहेका छन् ।
सामान्य रुपमा सोच्दा लाग्न सक्ला यस्ता ठाउँमा आउने किशोरीहरू किन र कसरी आउलान् ? लाग्नु स्वभाविक पनि हो । तर जब उनीहरूसँग बसेर कुरा गरिन्छ, एकादुई बाहेक अधिकांशको भनाइ हुन्छ बाध्यता ।
कसैको बाबुआमा छैनन् । कतिको आमा छैनन् । बुबाले अर्को श्रीमती (सौतेनी आमा) ल्याएपछि घरबाट निकालिदिएको । कोही, काठमाडौंमा भाँडा माझेर भए पनि केही कमाइन्छ भन्ने गरिब परिवारका छोरी ।
त्यसो त यस्तो अवस्था हालसालै वा एक दुई वर्ष यता मात्रै पनि होइन । डान्स रेष्टुरेन्ट, डान्स बार आदि जस्ता कार्यस्थलमा यौन उत्पीडन हुन्छ भनेर सर्वोच्च अदालतले १२ वर्षअघि नै भनिसकेको छ । हेर्नुस् फैसलाकाे पूर्ण पाठ ।
वि.सं. २०६२ सालमै अधिवक्ताहरू प्रकाशमणी शर्मा, राजु चापागाईं, रमा पन्त, कविता पाण्डे र शर्मिला श्रेष्ठले संयुक्तरुपमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
मनोरञ्जनका क्षेत्र भनिने होटेल, रेष्टुरेन्ट, दोहोरी साँझ, सानासाना खाजा घर, डान्स बार, गेष्टहाउसहरूले दिनुपर्ने सेवा भन्दा नदिनु पर्ने ‘यौन व्यवसाय’ लाई बढावा दिइरहेका छन् । यिनीहरूको अनुगमन र नियमनका लागि अब पनि बोल्नु पर्ने बेला भएन र ?
निर्देशिकाको प्रस्तावनमा भनिएको छ, ‘डान्स बार, डान्स रेस्टुरेन्ट, क्याविन रेस्टुरेन्ट, दोहोरी साँझ, मसाज पार्लरमा काम गर्ने महिला कामदारहरूलाई कार्यस्थलमा गरिने यौन उत्पिडनका व्यवहारहरूलाई नियन्त्रण गर्ने सम्वन्धमा हालसम्म नेपालमा कुनै कानुनको निर्माण नभएकोले, कार्यस्थलमा काम गर्ने श्रमजीवि महिला एवं अन्य कामदारहरूलाई मर्यादित एवं आत्मसम्मानपूर्वक, सुरक्षित वातावरणमा काम गर्न सक्ने वातावरणको श्रृजना गर्न वाञ्छनीय भएकोले, संसद (संविधानसभा) ले ऐन नबनाएसम्म सर्वोच्च अदालतबाट देहाय बमोजिमको निर्देशिका बनाई जारी गरिएको छ ।’ तर यससम्बन्धी छुट्टै ऐन हालसम्म बनेको छैन ।
मुलुकी ऐनदेखिकै व्यवस्था १६ वर्ष मुनिका किशोरी वा बालिकासँग सहमतिमै यौन सम्पर्क गरे पनि जबर्जस्ती करणी गरेको ठहरिन्छ । यस कानुनले पनि भेटेन ती संचालक/व्यवसायी र त्यहाँ आउने ‘ग्राहक’ हरूलाई ।
बरु यो क्षेत्रमा किशोरीहरू आउने क्रम झन् बढ्दो क्रममा रहेको बाल यौन शोषणको विरुद्ध काम गर्ने अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् । ९\_१० वर्षका बालिका समेत पुरुषको मनोरञ्जनका साधन बनिरहेका छन् ।